Automzụ ahịa akpaaka wetara ohere iji kewaa ndị ahịa gị n'ime mmadụ pụrụ iche, mepụta ọdịnaya maka ha - ọbụlagodi nkeonwe, ma nyefee ha ha na usoro a haziri ahazi ebe ndị na-akpata omume ha ga-ekpebi usoro ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, profaịlụ na ndụ ndụ ka na-adaberekarị na marketer. Chọpụta, ọ dabeere a otutu nnyocha na analysis… ma ndị ahịa ka bụ bụghị na-elekọta nke ha onwe ha akakabarede ụzọ.
A na-enweta mgbasa ozi ugbu a na usoro mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla. Ihe ngwọta ọ bụla nwere nhọrọ nke ezubere iche nke nwere ike ịdabere na profaịlụ, omume, ọnọdụ obodo, ma ọ bụ ngwaọrụ. Nke a na-enye ndị ahịa ohere ohere ịzụlite mgbasa ozi nke na-agagharị na atụmanya site na ntụgharị. Nke a bụ ohere dị egwu karịa na oge iji nweta oge karịa dị mfe na-emegharị ahụ atụmatụ.
Nwepu ọhụrụ infographic egosiputara ise nke netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta na uru nke ijikọta ha na nyiwe mmemme.